ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်ထုတ်ကုန်စက်ရုံ
PCB Layout၊ PCB Copy၊ PCB ပြောင်းပြန်
PCB Clone၊ PCB fabrication၊ SMT processing၊
Printed Circuit Board Assembly နှင့် အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်ခြင်း။
MCU Reverse၊ MCU Attack၊ IC Crack၊ IC ပုံဖော်ခြင်း။
PCB Copy နှင့် PCB Clone
IC Crack နှင့် Code Disassembling
Chip ပရိုဂရမ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
Bee Programmer ၊
LPC ချစ်ပ်စာဝှက်စနစ်သည် အောင်မြင်သည်...
EPM570 IC လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း။
8 အလွှာ PCB Clone
12 အလွှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PCB မိတ္တူ
12 အလွှာ PCB မိတ္တူ
ဖောက်သည်များအား ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ ထိရောက်ပြီး အဆင်ပြေသော ကုဒ်ဝှက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ချစ်ပ်စာဝှက်နည်းပညာ ချစ်ပ်ကုဒ်ဝှက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု
အရည်အသွေးသည် လုပ်ငန်း၏စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီး အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအား အချိန်ကုန်၊ အဆင့်မြင့်အင်ဂျင်နီယာနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။သစ္စာရှိဖောက်သည်များသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ဆောင်ကြပြီး ဖောက်သည်အသစ်များသည် နာမည်ကောင်းတစ်ခုအကြောင်း ကြားသောအခါတွင် မိတ်ဖက်ထူထောင်ရန် Sichi သို့ လာကြသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အရည်အသွေးမြင့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီသည် "ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြစ်ခြင်း" ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသဘောတရားကို အမြဲလိုက်နာခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူများအား ရောင်းမကုန်မီနှင့် ရောင်းချပြီးနောက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာအဖွဲ့တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
အရည်အသွေးမြင့် အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် "ဝန်ဆောင်မှုပထမပိုင်း" သဘောတရားကို လိုက်နာခဲ့ပြီး၊ သင့်အား လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးတွင် အကောင်းဆုံးရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ရန်၊ ပြောင်းပြန် R&D နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၏ ရှုထောင့်အားလုံးကို ဖြေရှင်းနိုင်စေရန်၊
PCB ကို အီလက်ထရွန်နစ် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်မှုတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။PCB မရှိလျှင် ခေတ်မီအီလက်ထရွန်နစ် သတင်းအချက်အလတ်လုပ်ငန်း လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်မဟုတ်ပေ။
Shenzhen Sichi Technology Co., LTD ကို 2000 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 1-32 အလွှာ PCB တွင် လျင်မြန်စွာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ၊ အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများနှင့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများအားလုံးကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် PCB စည်းဝေးပွဲ၊ PCB မိတ္တူ၊ PCB ကော်ပီ၊ IC အက်ကွဲ၊ PCB ဒီဇိုင်း၊ IC စာဝှက်စနစ်၊ ချစ်ပ်ပြောင်းပြန်ဒီဇိုင်း၊ SMT စီမံဆောင်ရွက်ပေးမှု၊ PCB ထုတ်လုပ်မှု၊ ရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများတွင် သြဇာအရှိဆုံးနှင့် သြဇာအရှိဆုံး ကော်ပိုရေးရှင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ နှင့် debu...
Shenzhen Sichi Technology Co., LTD ကို 2000 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 1-32 အလွှာ PCB တွင် လျင်မြန်စွာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ၊ အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများနှင့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများအားလုံးကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် PCB စည်းဝေးပွဲ၊ PCB မိတ္တူ၊ PCB ကော်ပီ၊ IC အက်ကွဲ၊ PCB ဒီဇိုင်း၊ IC စာဝှက်စနစ်၊ ချစ်ပ်ပြောင်းပြန်ဒီဇိုင်း၊ SMT စီမံဆောင်ရွက်ပေးမှု၊ PCB ထုတ်လုပ်မှု၊ ရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများတွင် သြဇာအရှိဆုံးနှင့် သြဇာအရှိဆုံး ကော်ပိုရေးရှင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ နှင့် debug...
GD32F103 IC တိုက်ခိုက်မှု
ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအာမခံချက်၊ မြင့်မားသောထိရောက်မှု၊ မြင့်မားသောပစ္စည်း၊ အရည်အသွေးမြင့်မားမှု၊ မြင့်မားသောထိရောက်မှု၊ နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ရောင်းချမှု၊ သင့်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးဝန်ဆောင်မှု
PCB ကို ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ စက်ရုံများနှင့် အနီးနားရှိ စက်ရုံများတွင်လည်း တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ဤစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းလိုအပ်သော ပါဝါမြင့်မားသော လုပ်ငန်းခွင်ဆားကစ်များဖြင့် မောင်းနှင်သည့် စွမ်းအားမြင့် စက်ကိရိယာများရှိသည်။ဤအဆုံးသတ်ရန်အတွက်၊ ရှုပ်ထွေးသောအီလက်ထရွန်နစ် PCB နှင့်မတူဘဲ 100 amperes အထိရှိသော လျှပ်စီးကြောင်းရှိသော PCB ၏ထိပ်တွင် ကြေးနီအထူအပါးကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။၎င်းသည် arc welding၊ ကြီးမားသော servo motor drives၊ lead-acid ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာများ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် အဝတ်အထည်ဝါဂွမ်းမရှင်းလင်းမှုကဲ့သို့သော အသုံးချမှုများတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
အီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်ကုန်များသည် ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ကုထုံးဆိုင်ရာ ကိရိယာများအဖြစ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ကြီးမားသော ပံ့ပိုးကူညီမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ဤအီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာများ၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များသည် အကန့်အသတ်မရှိဖြစ်နိုင်ချေအသစ်များဆီသို့ ဦးတည်သွားစေသည့် အဆက်မပြတ်တိုးတက်လာကာ ပိုမိုထိရောက်ပြီး ပြင်းထန်လာသည်။ ယင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ၏ အဓိကအချက်မှာ PCB ဖြစ်သည်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိ PCB သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ၏ထူးခြားသောကန့်သတ်ချက်များကိုပြည့်မီရန် အထူးပြုပါသည်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PCB ကိုလည်း အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော PCB ကို အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ကွေးညွှတ်နိုင်စေသည့် ကွေးညွှတ်နိုင်သော အလွှာနှင့်လည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဇွဲလုံ့လစိတ်ဓာတ်ကို လိုက်နာခြင်း၊ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ခြင်းတွင် အပြည့်အ၀ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ် နိုင်ငံတကာနည်းပညာများကို အဆက်မပြတ်စုပ်ယူခြင်း၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတိုးတက်စေခြင်း၊ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ ပြင်းထန်သောစျေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွင် ဖောက်သည်များ ကောင်းစွာလက်ခံရရှိခြင်း၊ မှာယူမှုပမာဏသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးလာပါသည်။ .
နည်းပညာမြင့်ထုတ်ကုန်များ၏မျက်နှာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် "မူအရယူဆောင်ခြင်း" စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆက်လက်သင်ယူသင့်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများထံမှ သင်ယူပြီး စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုဖြင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ပြီး နောင်တော်များ၏အခြေခံကို ပြန်လည်ဖန်တီးသင့်ပါသည်။
စျေးကွက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အာရုံစိုက်နေချိန်တွင် Shenzhen Sichi ၏ R&D ဌာနသည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖြင့် အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင် အမြဲတစေ လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အခြေခံနည်းပညာဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကို အဆက်မပြတ်ဖြတ်ကျော်ကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနပြုတိုးတက်မှုနှင့် အမျိုးသားလုပ်ငန်းကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေပါသည်။နှစ်ပေါင်းများစွာ ခက်ခဲစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နည်းပညာမြင့်စက်မှုလုပ်ငန်း ဒေသချဲ့ထွင်မှုကို ထောက်ခံအားပေးသူနှင့် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို "တရုတ်ပြည်၌" မှ "တရုတ်ဉာဏ်ရည်မြင့်ထုတ်လုပ်ရေး" သို့ အစဉ်တစိုက် မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။
LPC ချစ်ပ် ကုဒ်ဝှက်ခြင်း အောင်မြင်သည်။
Shenzhen Sichi Technology Co., LTD ကို 2000 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 1-32 အလွှာ PCB တွင် လျင်မြန်စွာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ၊ အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများနှင့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများအားလုံးကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် PCB စည်းဝေးပွဲ၊ PCB မိတ္တူ၊ PCB ကော်ပီ၊ IC အက်ကွဲ၊ PCB ဒီဇိုင်း၊ IC စာဝှက်စနစ်၊ ချစ်ပ်ပြောင်းပြန်ဒီဇိုင်း၊ SMT စီမံဆောင်ရွက်ပေးမှု၊ PCB ထုတ်လုပ်မှု၊ ရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများတွင် သြဇာအရှိဆုံးနှင့် သြဇာအရှိဆုံး ကော်ပိုရေးရှင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ နှင့် debugging ။
IC MCU ပရိုဂရမ်မာ
LCD IC မီးယူနစ်၊ ပရိုဂရမ်မာ
လိပ်စာ- အခန်း 302၊ RongXing အဆောက်အအုံ၊ FuHao ဥယျာဉ်၊ 168# လမ်း Bulong၊ Bantian လမ်း၊ Longgang ခရိုင်၊ Shenzhen City၊ Guangdong၊ တရုတ်။
ဖက်စ်-+၈၆ ၇၅၅ ၈၃၀၄ ၅၂၇၈
လူအုပ်စု-+86 134 8015 1328
Shenzhen Sichi Technology Co.,LTDကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒစည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
© မူပိုင်ခွင့် 20102020 All Rights Reserved.
Hot Products များ ဆိုက်မြေပုံ
Pcb ဒီဇိုင်းနှင့်တပ်ဆင် Msp430 Mcu Crack လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း။ စာချုပ် Pcb ညီလာခံ Fpga Pcb အပြင်အဆင် Icl7107 Voltmeter Pcb Layout [Ic Reverse Engineering]